TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ iyo TÜDEMSAŞ Maamulada United | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia26 EskisehirTÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ iyo TÜDEMSAŞ Maamulada United
26 / 03 / 2020 26 Eskisehir, 54 Sakarya, 58 Sivas, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY
TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ iyo TÜDEMSAŞ MANAGEMENTS way midoobeen, iyo TÜRASAŞ, oo ah shirkad aad uga xoog badan wadashaqeyntaan, ayaa la sameyn doonaa.
Dhammaan xarumaha ayaa ah noolaha oo sameysta aqoonsi iyaga u gaar ah waqti ka dib. Xusuusta hay'ad ee TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ waa qeybta ugu muhiimsan ee qeybta tareenka ee dalkeena ay la leeyihiin dad aqoon u leh iyo awooda fikirka ay ilaa iyo maanta tababartey.
Cabbirkiisa, TÜRASAŞ wuxuu door muhiim ah ka noqon karaa qaybta tareenka adduunka.
Go'aamiyeyaasha khibradda u leh wax soo saarka warshadaha ayaa og sida ay u qiimo badan tahay xusuusta shirkadaha sida ay ugu wanaagsan yihiin waddamada annaga oo kale ah.
Dowladeena, oo kordhisay maalgashiga ay ku sameysay qeybta tareenka ee dalkeena sanadihii la soo dhaafay, waxay sidoo kale wadada u xareysay hay’adahan iyo maalgashiga waaxda ganacsiga gaarka loo leeyahay. Si looga fogaado in lagu lumiyo faa'iidooyinkaas, waa in fiiro gaar ah la siiyaa qaab dhismeedka cusub.
Shirkadaha xiriirka la leh ee soo saaraya jaangooyooyinkooda iyo doomaha heerarka adduunka waa inay fiiro gaar ah siiyaan ilaha aadanaha ee qaab dhismeedka cusub.
Iyadoo lagu tilmaamayo in ay shirkadda TULOMSAS awoodda kaliya ku rakiban, taas oo soo saari kara dhammaan qalabka loo baahan yahay maalgashi ee Turkey kiisas yar. Awoodda la rakibay ee labadeena hay'adood ayaa sidoo kale ku filan inay ka mid noqdaan soo saareyaasha loo dhoofiyo adduunka. Waaxdu waxay diyaar u tahay inay bixiso macluumaadka tafaasiisha arrintan.
muuqashadii Tani gudbi karo wax soo saarka iyo sahayda silsilad baabuurta Turkiga ee meesha dhulka iyo dabaqa. Dib-u-habeynta kahor, saddexdaas shirkadood; Waxay ahayd mid aan dhammaystirnayn sababtuna ay ahayd JCC sababta oo ah waxay ahayd suuq geyn, maal iyo nooc soosaar gaar ah. Tani waa qaab-dhismeedka cusub, iwm. Waxay si dhakhso leh u horumarin kartaa qodobbadeeda daciifka ah marka loo eego tartamayaasha.
Qaab-dhismeedkan, waxaan aaminsanahay in TCDD, oo ah macaamiisha ugu weyn ee saddexda shirkadood, ay si gaar ah u yareyn doonto faa'iidada laga filayo haddii qaab dhismeedka waaxda gaarka loo leeyahay aan la kordhin, haddii saamiga qaybta gaarka loo leeyahay aan la kordhin. Kheyraadka loo qoondeeyay waaxda; waxaa ka faa iidaysan lahayd in aan loo isticmaalin dhismaha baabuurta laakiin la hagaajiyo kaabayaasha. Bixinta qaybta gaarka loo leeyahay si ay u sameeyaan maalgashi gawaarida ayaa wadada u xaaraya inay noqdaan kuwo tartan badan.
Nolosheena waxay ku biirtay wadada tareenka; Rajada ugu weyn ee laga helo maamulada ayaa ah in tabarucaada dhaqan dhaqaale iyo dhaqaale ee TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ iyo TÜDEMSAŞ magaalooyinkooda aan waligood la iska indhatiri doonin howshan qaab-dhismeedka cusub.
Xaraashka magaalada iyo dadka magaalada ee qaatay nolosha tareenka ma ahan in la jabiyo.
Marna waa inaan la iloobi doonin in qiimaha iyo faa'iidooyinka jidkeenna tareenka ay sidoo kale u leeyihiin muwaadiniinta dalkeenna.
TÜVASAŞ, TÜDEMSAŞ iyo TÜLOMSAŞ ayaa la isku daray oo TÜRASAŞ ayaa la aasaasay!
Wareegyo ayaa la jiiday Izmit Bay
Turkiga iyo Kazakhstan ayaa isku xiray waddada tareenka
Gaadiidka tareenada ayaa ku biiray jidka tareemarka Üsküdar-Çekmekoy
Zincirlikuyuda Metro iyo Metrobus ayaa midoobey
Laynka Aasiya iyo Yurub ayaa midoobey
Uskudar-sancaktepe Subway | Ümraniye Bazaar iyo Bulgurlu ayaa isku duubay
Labo dhinac oo ka mid ah Istanbul ayaa ka soo jeeda dhinaca sare iyo hoose ee badda
TD Rail iyo Prose ayaa midoobey
Laba collar ayaa ku kulmay buundada Izmit Bay (Fiidiyow)
Balcowsan waxay ku midoobeen Inciralti iyo Izkaray
Hagaag, sidee bay u wanaagsan tahay tan, Aniga ma lihi luuqad dhegaha, dhegtaani kama hadleyso farriinta aqrinta waa maqal la’aan. Waxaa jira TL 11 sano, tan waxaan haystaa wiil gabar da '4.350 jir ah ma jiro iskuulkan lacag majiro wax deyn ah dhaar baan ku dhaartaye maan cunin eber dhaar dhaar ah ma lihi aabe hooyadey waa kan aniga waxaan ahay waxaan shaqeeyaa Eskişehir Yolu Hacettepe University Beytepe Campus Student Cafeteria Weelka Dhaqitaanka Nadiifinta Waxaan shaqeynayay 190.000 .1.584 waxaa jira wax soo saarkan 10 ma jiro taas miyaanan siinin sarkaalada shaqaalaha maxaad u dhahdaa yaa tihiin waxaan ahay howlgab mushahar 15 TL maxaad u dhahdaa yaa ah kan aad tahay cunug dugsi sare dugsiga waxaan ku siiyaa lacag halkaas maxaad u dhihi kartaa yaa waalan yahay qatar baan leeyahay tan waad shaqeysaa Ma fahmin markaan helay taleefanka whaatsapp 01.01.2006 31.03.2018 1.700 ok